Barcelona oo Dirqi uga Badisay kooxda Villarreal “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Barcelona oo Dirqi uga Badisay kooxda Villarreal “SAWIRRO”
Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou 3-2 uga badisay kooxda Villarreal.
Kooxda Villarreal ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 30-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Denis Cheryshev.
Kooxda Barcelona ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta heshay gool barbardhac ah,waxaana u dhaliyay ciyaaryaahan Neymar,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Villarreal ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta mar kale hogaanka u qabatay ciyaarta,waxaan daqiiqadii 52-aad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay ciyaaryahan Luciano Dario Vietto.
Ciyaaryahan Rafinha ayaa daqiiqadii 54-aad ee ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa hogaanka ciyaarta qabatay,waxaana daqiiqadii 56-aad ee ciyaarta gool sedaxaad u dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi.
Kooxda Barcelona ayaa kaalinta labaad uga jirtokala horeynta horyaalka Spain ee La Liga,waxana ay leedahay 50-dhibcood,halka kooxda Villarreal ay horyaalka uga jirto kaalinta lixaad,iyadoo leh 38-dhibcood.
AC Milan oo Ka Badisay Kooxda Parma